Abaphila Ngokuthengisa Ezithaladeni zeHarare Bathi Kabayindawo
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare lokhu beqinisa amakhanda besithi bamlindele uhulumende othembise ukubasusa ezitaladeni, besemba phansi ngenduku besithi kabayi kusuka lapho bathengisela khona besithi bazolwisa laloba kungalethwa imibhobo.
Lokhu kuza ngemva kwenkuthazo kamanisipala ukuba abaphila ngokuthengisa laba basuke lapho bethengisela khona ezitaladeni zedolobheni le Harare ukuze kuvinjwe ukusabalala komkhuhlane wesihudo seCholera.
Umanisipala kanye lezinye ingatsha zikahulumende bathi ukuthengiswa kokudla ezitaladeni yikho okusabalalise lumkhuhlane e Budiriro le Glenview.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba endaweni abasebenzela kuyo lapho kuhlangana khona umgwaqo u Robert Mugabe lo Julius Njerere.
Ophatheke kwezokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni ubeka uhulumende umlandu wokungafuni ukululungisisa ngendlela esiza amacele wonke, abaphila ngokuthengisa labahlaselwe ngumkhuhlane.
UNyoni uthi abaphila ngokuthengisa bevele behlezi bekhona lakwamanye amazwe umahluko yikuba lawo mazwe esakhela laba bantu indawo ezinhle zokuthengisela.
Kodwa uManisipala uthi kumele basuke laba bantu edolobheni, okungenye yemizamo yokulwisana lokusabalala kwesihudo se Cholera.
Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme uchasisa ngenyathelo lokususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Kunsukwana ezisanda kwedlula, umphathintambo wezempilakahle uDr Obediah Moyo, utshele intathelizindaba ukuba sebecele amapholisa ukusebenzisana lomanisipala ukususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni njengendlela yokulwisa ukusabalala kweCholera eqhamuke emzini we Glenview le Budiriro.
Kuke kwaba lokuphithizela okukhulu abantu bebaleka besabalala ndawana yonke ngesikhathi lumsakazo ukhulumisana labaphila ngokuthengisa laba kumgwaqo u Robert Mugabe e Harare sekubonakale imota zohlobo lwamalorry ezintathu zithwele amapholisa ohlangothi lwe riot zihamba ngomgwaqo u Julius Nyerere kanye lezimbili ezithwala amanzi ababayo athelwa abantu lapho kube lomsindo.
Kodwa uzulu ophila ngokuthengisa wemba phansi ethi mabenze abakufunayo abakuzikhundla zikahulumende kodwa bengasoke baya ndawo ngoba kuyindlela bephila ngayo kungekho enye.